madaxweynaha Soomaaliya oo ku qarxiyay milkiilayaasha idaacada wareegtana kasoo saaray. - jornalizem
madaxweynaha Soomaaliya oo ku qarxiyay milkiilayaasha idaacada wareegtana kasoo saaray.
Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu si cad u sheegay in milkiilayaasha idaacadaha Soomaaliya ay ku tuntaan xuquuqda suxufiyiinta Soomaaliyeed isaga oo amar adag dul dhigay milkiilayaasha si looga gudbo dhibaatada wariyaasha ay ku hayaan.
Xassan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay wariyaasha Muqdisho qaarkood ayaa waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in ay jiraan milkiilayaal wariyaasha ku shaqaaleysiiiya shaqo magac ku bedelasho isaga oo dhanka kale daaha ka rogay in aysan jiri doonin waxbaabaha nuucaas oo kale ah xilligaan wixii ka danbeeya.
“Waa ognahay in wariyaal lagu shaqaaleysiiyo lacag la’aan iyada oo loo sheegayo in uu caan ku noqon doono idaacada oo uu mustqablka shaqo ka heli doono Idaacadaha heerka caalami. Arintaasu sax maaha, cadaalad maaha. Waa waxa uu la dagaalayo xeerka saxaafada Soomaaliya. Wariyaha dhibtoonaya ee qatarta ku jira ee la dilayo waa in uu helo mushaar. Hadii la rabo mushaarku yuu badnaan. Hadii larabo mushaar yaan loo bixin oo gunna hala dhoho. Waa in ay ka waantoobaan milkiilayaasha idaacaduhu arintaas. wax badan waa kusoo moodeen hasa yeeshee maanta kadib laga yelimaayo”, Madaxweyne Xassan Sheekh Maxamuud ayaa uga farxiyaya wariyaasha soo koraya ugana nixiyay Milkiilayaasha idaacadaha ee dhiig miiradka ah dhibka bandanna ku haya saxafiyiinta jecleestay in ay mihnadooda hor-mariyaan.
In milkiilayaasha idaacaduhu ay dhiig miirad yihiin amarka madaxweynaha kasoo baxayna uu dhibaayo waxaa cadeynaya oo daliil u ah in ay yartayhay idaacad sii deysay codka madaxweynaha ee looga hadlaayay arintaasi iyaga oo diidan in uu gaaro codku bulshada Soomaaliyeed barina lagu xisaabtamo.
Milkiilayasha idaacaha Muqdisho ayaa waxa ay ka simanyihiin in ay dhalin-yaro badan oo hami u leh heer ka gaarida saxaafada in marka ay codsi shaqo u geestan ay shuruud uga dhigaan in uusan lacag weydiineyn shaqada loo dirana uu uga baxaayo sidii loogu tala galay arintaas oo ku qasbeysa wariyaha doonaya in uu bulshada is-baro in uu ku shaqeeyo, waxaana inta badan dhacda in wariyuhu marka uu hubsado in uu idaacada kale la shaqeyn karo uu isaga tago idacada ayna qorato mar kale kuwa tababar ah oo iyana lacag la’aan ku shqeEya arintaas oo Hormuud u noqotay in idaacadaha badankood aysan ka bixn barnaamijyo tayo leh oo ay diyaariyeen wariyaal rug cadaa ah oo saxda iyo qladka ka lagarn kara